भैरवी गाउँपालिकाका घोषणा–पत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रम – Tannerivoice
‘‘नागरिकलाई निराश पारेका छैनौं’
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दा चुनावी प्रतिबद्धता के–कति पूरा भए, कति पूरा गर्न बाँकी छन् र कार्यान्वयनमा के–कस्ता समस्या छन् भनि हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढालाई नै सोधेका छौँः
प्रेमबहादुर बुढा (अध्यक्ष, भैरवी गाउँपालिका, दैलेख)
कति पूरा–कति अधुरा ?
माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लू–डाँडीमाडी–कुसापानी, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगु जिल्लाको नाग्चेनाग्ला सडकको कुरा गर्दा केही दिन अघि मात्रै हाम्रो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाराम पंगाली र म केही साथीहरूलाई साथमा लिएर अनुगमनमा गएका थियौं । यो सडकको अनुगमनको लागि हामी भैरवी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ७ को ब्याउलीभन्दा अगाडि बतासेसम्म स्कार्पियो र बोलेरो जीप लगेर गएका थियौं । त्यहाँसम्म सहजै गाडी जान्छ । त्यहाँबाट २० मिनेट पैदल हिँड्ने हो भने कालिकोटको सिमाना भेटिन्छ । यस वर्ष हामीले यस सडकलाई कालिकोटको पान्तडीस्थित कर्णाली रागमार्गमा जोड्ने प्रवल सम्भावना छ । यदि यो सडक जोडियो भने जुम्ला कालिकोटका नागरिकलाई कर्णाली राजमार्गभन्दा ६८ किलोमिटर छोटो पर्नेछ । माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लू–डाँडीमाडी–कुसापानी, कालिकोट–जुम्ला हुँदै मुगु जिल्लाको नाग्चेनाग्ला जोड्ने सडकको निर्माणले यो सडकले छुने दैलेख कालिकोट तथा जुम्लाका क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर परिवर्तनमा ठूलो योगदान गर्ने देखिन्छ ।
श्रीस्थानमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत अनुरोध गरेपछि २०७६ सालको असोज महिनादेखि लगातार फागुन मसान्तसम्म काम भयो । जानकारी भएअनुसार उक्त सर्भेको नतिजा चाइनाको ल्याबमा जाँच भइरहेको छ र पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो सम्भावना रहेको आँकलन छ । कोरोना भाइरसका कारण उक्त सर्भे टोली नेपाल आउन सकेको छैन । यदि यो काम सफल भएमा गाउँपालिका मात्रै नभइ देशलाई नै फाइदा हुनेछ । स्थानीय तहको तर्फबाट यस कार्यलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग हामीले गरेका छौँ ।
गाउँपालिकाका धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणलाई चुनावको प्रतिबद्धतामा प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । यो तीन वर्षमा भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित श्रीस्थानमा पाहुनाघर साथै तिर्थयात्रीहरूका लागि स्नानस्थल निर्माणका लागि प्रदेशका माननीय सुशील थापाको सक्रियतामा २० लाख रकम विनियोजन गरेका छौं । भैरवी तिर्थस्थलको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हामीले पहिलो चरणमा सिढी निर्माण गरेका हौं । उक्त स्थानसम्म मोटरबाटो पु¥याउँदैछौं । त्यस्तै दैलेख र कालिकोटको सिमाना वडा नं. ७ मा पर्ने व्याउलीमा पिकनिक स्पटको निकै राम्रो सम्भावना रहेको हुनाले उक्त स्थानलाई पिकनिक स्पट बनाउने योजनामा छौं ।
चुनावी घोषणापत्रमा बडलम्जी–डाँडीमाडी–कुसापानी र बडलम्जी–रावतकोट सडकलाई स्तरउन्नति र कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । सडक यातायात पूर्वाधार विकासको विषय हाम्रो निकै प्राथमिकताको विषय हो । डाँडीमाडी बजारको सडकलाई हामीले ग्राभेल गरेर नालीसमेत बनाएका छौं । जगत्रादेखि रावतकोट हुँदै भिरखेतको पुलसम्म १० किलोमिटर सडक मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेको जुन संघीय सरकारको उक्त सडक आयोजनाले नै कालोपत्रे गर्दैछ । त्यसबाहेक अन्य सडकहरू स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । कालिकोटको सिमाना नजिकैको व्याउलीसम्म सहज तरिकाले गाडी जान्छ ।
भैरवी गााँउपालिकाको केही स्थानमा खानेपानीको समस्या थियो । हामीले हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा बडलम्जी खानेपानी आयोजना र अन्य साना खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापन गरी भैरवी गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । यो बीचमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त प्रयास गरेका छौँ । बडलम्जी खानेपानी आयोजना वि.सं. २०४० सालमा निर्माण सुरु भएको थियो । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय राजबहादुर बुढाको अगुवाइमा १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । उक्त आयोजनाको मुहान भैरवी–७ मा रहेको छ । हामीले उक्त मुहान नजिकका नागरिकहरूलाई पालिकाका अन्य नागरिकलाई पानी दिनुपर्छ र मुहान संरक्षण गर्नुपर्दछ भने विश्वस्त गरेका छौं, अहिले पानी आइरहेको छ । भैरी, बडलम्जी र रावतकोटसम्मका जनताले पानी खाइरहेका छन् । त्यस्तै ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले रावतकोटमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना गत वर्ष सम्पन्न गरेको छ । परियोजनाले गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानी तथा सिँचाइलगायतका काम गरिरहेको छ ।
चुनावी घोषणा–पत्रमा भैरवी गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा जडिबुटी र दक्षिणी क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल र मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र बनाई कृषिमा आधुनिकीकरण प्रविधि अपनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । भैरवी गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा अलैंची र किवी खेतीको सुरुवात गरेका छौं । त्यसका साथै २ वटा दुध संकलन केन्द्र पनि स्थापना भएका छन् । डेरीले छुर्पी उत्पादन गरेर दैलेख र सुर्खेतको बजारमा बिक्री गर्ने गरेको छ । त्यसका साथै ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरी कृषि विकास शाखाले काम गरिरहेको छ । कृषकलाई तालिम दिने बिउविजन वितरण गर्नेलगायतका काम भइरहेका छन् । कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण गर्ने पनि हाम्रो चुनावी प्रतिबद्धता रहेको छ । हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट एक करोड र ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट साढे नौ करोड रकम विनियोजन भइ काम भइरहेको छ । दुई हजार शाखा लाइनको काम र पाँच सय मेन लाइनको पोल आइसकेको छ । तार जोड्ने, पोल गाड्ने काम भइरहेको छ । यस वर्ष ६३ लाख रूपैयाँ विद्युतको लागि छुट्याएका छौं । ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणबाट ९० प्रतिशत रकम थपियो भने पाँच करोड बराबरको विद्युतको काम हाम्रोमा फेरि पनि हुन्छ । जसबाट हामीले यहाँका ९८ प्रतिशत नागरिकको घरधुरीमा विद्युत पु¥याउन सफल हुनेछौं ।
भैरवी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थान जोड्ने सडकहरू जस्तै बाजथला–बगौरा, बगना–गडाजिउला, डाँडीमाडी–गडाजिउला, डाँडिमांडी–सैन, डोक्रा–कुसापानी साथै कुसापानी–गैरासरु–कडेनी–गोर्ती–काशीकाँध, कुसापानी–घुम्नेखाली–कुर्माकोट–कुटी–काशीकाँध सडक निर्माण गर्ने हाम्रो चुनावी प्रतिबद्धता थियो । यसको लागि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं । रावतकोट–जाहारमाडी–नाभिस्थान हुँदै श्रीस्थान सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षको लागि दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गतवर्ष ५० लाखको काम भएको छ । बाँकी काम भइरहेको छ ।
चुनाव अगाडिको प्रतिबद्धतामा भैरबी गाउँपालिकामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र र आधुनिक घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । यसका लागि जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा स्थापना गर्ने सोच भइरहेको छ । स–साना घरेलु उद्योग बाँस निगाला, अल्लो प्रशोधन आदि उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । गाउँपालिकाले यस्ता विषयलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएका छौं ।
चुनावी घोषणा–पत्रमा रहेको गडाज्यूला, छामघाट र पोरीगाडमा भइरहेको नदी कटान नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतामा पनि हामीले धेरै नै काम गरेका छौँ । गडाज्यूलामा नदी कटान नियन्त्रणका लागि ३० लाखको काम भइसकेको छ । पोरीगाडमा भइरहेको नदी कटान नियन्त्रण गर्न पनि यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बजेट माग गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा बजेट माग गर्नका लागि संघर्ष गर्ने थलो प्रदेश सरकार नै हो, हामीले त्यहाँ बजेट माग गरिरहेका छौं ।
गडाज्यूला र सैन सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने र छामघाटमा पम्पिङ्ग प्रविधिबाट सिँचाइ आपूर्ति गर्ने चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि काम गरेका छौँ । गीताचौर सिँचाइ कुलो सैन हुँदै जान्छ र रावतकोटको ठूलो भूमि सिँचाइ हुन्छ । यदि रावतकोटको खेतीयोग्य भूमिमा सिचाइ भयो भने दैलेख जिल्लालाई अन्न पु¥याएर बाहिर पठाउनेसम्म पुग्छ । यो वर्ष एक करोड रकम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेर उक्त आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम हुँदैछ । गडाज्यूलामा पनि सिँचाइ र तटबन्धनको लागि प्रदेशसँग बजेट माग गरेका छौं ।
हामीले गाउँपालिकामा स्थापना गरिने विषयगत कार्यालयहरू साविकका चार वटा गा.वि.स. समेटिने गरी स्थापना गर्ने घोषणा–पत्रमा लेख्न त लेख्यौँ तर यो कार्य सम्भव हुने सकेन् । तर यहाँ भयो कस्तो भने राज्यले एकीकृत सेवा दिनुपर्छ भनेकाले समस्या परेको हो । अहिले सबै विषयगत कार्यालयहरू भैरवी गाँउपालिकाको केन्द्रमा रहेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र भएको ठाउँ भने सबै वडाहरूको पायक पर्ने ठाउँ भएकाले विषयगत शाखाहरू गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै स्थापना गर्ने निर्णय ग¥र्याैं । यसले सेवाप्रवाहमा खासै कठिनाइ भएको छैन ।
चुनाव अगाडिको घोषणा–पत्रमा वनजंगल फडानी र प्राकृतिक श्रोत विनाशलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं । वनजंगल फडानी र प्राकृतिक श्रोत विनाशलाई नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक कामहरू गरेका छौं । वनजंगल जोगाउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रयासहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट भएका छन् । पहिरो नियन्त्रण गर्नको लागि डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले डोजर प्रयोग नियन्त्रण गरी डोजरले गर्नै काम मानिसहरूबाट नै गर्ने अभियानको थालनी समेत गरेका थियौँ । यसले गर्दा मानिसहरूले रोजगारी पनि पाएका छन् भने वनजंगल संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण समेत भएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूको स्तरयुक्त विकास गर्ने र सिङ्गो भैरवी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एउटा क्याम्पस स्थापना गर्न पहल गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता थियो । वडा नम्बर ६ मा डिप्लोमा तहको ३ वर्षे बालीविज्ञान र पशुविज्ञानको अध्यापन सुरु भएको छ । डिप्लोमा तहको क्याम्पस स्थापना गर्नचाहिँ विज्ञहरूको सुझावअनुसार सानो इलाकामा तत्काल सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने देखिएपछि तत्काल क्याम्पसको विषयमा हामी अगाडि बढेका छैनौं ।
हामीले हाम्रो चुनावी प्रतिबद्धतामा भैरवी गाउँपालिका समेटिने गरी विमानस्थल निर्माणको पहल गर्ने उल्लेख गरेका थियौँ । भैरवी गाउँपालिकाको रावतकोटको रतिखालमा विमानस्थल निर्माणको कुरा चलेको पनि हो । जहाँ अलिकति सल्लाका रुखहरू काट्नुपर्छ । चुनावी घोषणपत्रमा त हामीले लेखिम तर छलफल संवाद अगाडि बढाउँदा विमानस्थल भनेको सहजै जाने स्थानमा उपयुक्त रहनेछ । जस्तो सुर्खेतमा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि त्यसको खर्च राज्यले व्यहोर्दैन । त्यहाँको आन्तरिक आम्दानीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले खर्च धान्न नै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुर्खेतका साथीहरूका सुझावअनुसार काम गरेका छैनौं । औद्योगिक केन्द्रको कुरा गर्दा हामी क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छौं ।
हाम्रो अर्काे चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धता थियो– उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य धातु, स्लेट, जडिबुटी, जंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने । संरक्षित क्षेत्रको कुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा भइरहेको छ । जहाँ एकदमै ठूलो जंगल छ । गाउँपालिकाभर रहेको जंगलको ४४ प्रतिशत जंगल सोही वडामा रहेको छ । जहाँ पानीका मुहानहरू छन्, त्यहाँ संरक्षणको सोच बनाएर काम गराएका छौं ।
एक वडा–एक उत्पादन क्षेत्र, एक वडा–एक सहकारी र एक वडा–एक पार्कलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । उत्पादन क्षेत्रको कुरा गर्दा अलैंची र किवी उत्पादन भइरहेको छ । पार्क वडा नं. ५ डोक्रामा निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौं ।